Xog:-Khayre oo la filayo inuu baneeyo Xafiiska July. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Jun 18, 2017
Raiisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Somalia, Md Xasan Cali Khayre ayaa lagu waramayaa inuu soo wajahay Culays Siyaasadeed, kadib markii ay isaga iyo Madaxwaynaha ku kala aragti duwaanaadeen arrimaha Maamulka iyo Siyaasadda. Waxaana Warar ay heshay Hornafrik ay sheegayaan in Khayre ay suuragal tahay inuu Xafiiska baneeyo Dhamaadka July,
Culayska ugu badan ayaa ka soo wajahaya Raiisul Wasaare, Khayre dhinaca Xildhibaanadda Baarlamaanka Somalia oo saluugsan badankood siday wax u socdaan. Waxayna Xildhibaanadda isku diyaarinayaan inay Mooshin ka keenaan Khayre marka uu furmo Fadhiga Baarlamaanka Somalia.
Gud Baarlamaanka Somalia, Maxamad Cusmaan Jawaari oo qayb ka ah Xildhibaanadda saluugsan siday wax u socdaan ayaa isku diyaarinaya inuu qabto Mooshin ka dhan ah Raiisul Wasaaraha. Waxaana Mooshinkan oo haddaba diyaarsan saxiixay 137 Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Somalia, iyadoo ay jiraan in ka badan 50 Xildhibaan oo Mooshinka taageersan, laakiin aan wali saxiixin.
Madaxwayne, Maxamad C/laahi Farmaajo oo soo magacaabay Khayre ayaa u sheegay Xildhibaano u tagay inuusan difaaci doonin Raiisul Wasaaraha oo uu ku waafaqsan yahay inay ridaan. Wuxuuna u sheegay Xildhibaanadan Madaxwaynuhu inay u madax banaan yihiin Shaqooyinka loo igmaday oo ay ka mid tahay la xisaabtanka Xukuumadda.
Farmaajo waxa uu dad ka ag dhaw u sheegay in Khayre uu ka sugayay inuu qanciyo Beelaha uu Kursigooda ku fadhiyo, si loo gaaro Dib u Heshiisiin, Isla markaana loo helo Dawlad shaqaysa, wuxuuse ku dhaliilay inuusan u socon isu soo dhawaynta beelaha iyo isku soo dumidooda.
Durba waxaa lagu arkayay Hoteeladda Muqdisho xubnaha taageersan Madaxwayne Farmaajo oo dhaliilaya hab Dhaqanka Raiisul Wasaaraha, taasoo muujinaysa inay Labada nin ku kala tageen Siyaasadda. Waxayna qaarkood ku doodayeen in Hal ku Dhigga igu Sawir sababta ay ugu baxday Masuuliyiinta Dawladda inuu leeyahay Khayre oo ay ku eedeeyeen inuu ku mashquulsan yahay Is muujin.
Xog ay heshay Hornafrik ayaa sheegaysa in Gud Gobalka Banaadir, Thaabid uu sidoo kale wax ka riixayo in la rido Raiisul Wasaare Khayre, Walibana uu ku bixinayo Dhaqaale badan, Waxayna Xogta muujinaysaa in Thaabit uu isku diyaarinayo marka la rido Khayre in loo magacaabo Raiisul Wasaaraha Somalia.
Xildhibaanadda Damul Jadiid, Daljir, Aala Sheikh, iyo Horusocod oo u badan Xildhibaano ku xiran Shariif Xasan ayaa isku bahaystay inay ridaan Khayre. Waxayna dhamaantood Koox kastaa isku diyaarinaysaa in iyada la siiyo Raiisul Wasaare. Laakiin Madaxwayne Farmaajo ayaa u ballanqaaday Thaabit haddii uu meesha ka baxo Khayre inuu isaga ka dhigayo Raiisul Wasaaraha Somalia.
Raiisul Wasaare Khayre oo isna Xubno ku afkaara u xilsaaray inay kala jabiyaan Xildhibaanadda doonaya inay ridaan ayaa isku diyaarinaya inuu 4 Sanno ka dib isku soo sharaxo Madaxwaynanimadda Somalia, isagoo isku arko inuu Taageero ka haysto Shacabka.
Khayre waxa uu sidoo kale gacan saar la samaystay Dawladda Itoobiya, iyo Qaar ka mida Dawladaha Khaliijka ee uu Madaxwaynaha Dhabarka u jeediyay markii ay Xiriirka u jareen Qadar. Hase yeeshee Dawladahan laftigoodu kalsooni badan kuma qabaan Khayre, sidaas darteed ma doonayaan inay Taageero buuxda siiyaan, maadaama Xildhibaanadda hadda ka ololaynaya ay u badan yihiin kuwo Saaxiib dhaw la ah Wadamadan.
Madaxwayne Farmaajo oo horay u ballanqaaday in 4 Sanno ay isla dhamaysan doonaan isaga iyo Raiisul wasaaruhu ayaa hadda u muuqda inuu badalay Aragtidaasi sababo la xiriira Culays ka soo wajahay Beelaha Qaarkood. Iyo isagoo u arka Khayre in haddii uu ku awoodaysto uu la loolami doono.
Ma ahan wax ku cusub Siyaasadda Somalia in Madaxwayne iyo Raiisul Wasaare kasta ay is qabtaan, ugu dambayntiina waxaa baxa Raiisul Wasaaraha sida laga bartay Dawladihii isaga dambeeyay Dalka oo ay ragaadiyeen Khilaafka soo kala dhex galay Madaxwaynaha iyo Raiisul Wasaarah.